MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardCrystal Jade mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Crystal Jade Kitchen သည် တရုတ်ရိုးရာ Chinese Cantonese အစားအသောက်များကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၅နှစ်မှစတင်၍ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး လူကြိုက်များလှသည့်စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး တရုတ်ရိုးရာအစားအသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာကျော် Michelin Guide အဖွဲ့အစည်းမှ
ပေးအပ်သော Michelin One Star ရရှိထားသည့် နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော Brand တခုဖြစ်သည်။ ဟင်းလျာများကို တရုတ်ရှေးရိုးရာမပျက်စေဘဲ ယခုအခါတွင် အာရှပစိဖိတ်နယ်ပယ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇နိုင်ငံတွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁၂၀ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိသည်။
Crystal Jade ဆုလက်ဆောင်
MPT Club Diamond : ၇,၅၀၀ ကျပ် လျှော့စျေး၊
MPT Club Platinum : ၅,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေး၊
(၁၀) ရက် စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀ မှ (၃၀) ရက် စက်တက်ဘာ၊ ၂၀၂၀ အထိ
၁။ Crystal Jade Promo Code ကို MPT မှ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း SMS ဖြင့်ပေးပို့ပါမည်။ SMS အမည် “ MPTStayHome” အားစစ်ဆေးပါ။
၂။ *345*4*2# သို့ခေါ်ဆိုပါ၊ ထို့နောက် Promo Code အားရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ Code ထည့်သွင်းမူ အောင်မြင်ကြောင်း SMS သင် ရရှိပါမည်၊ ၎င်း SMS အား ဆိုင်ကောင်တာသို့ ပြသပါ။
၂။ MPT Money အကောင့်ဖွင့်ထားသူ နှင့် MPT Point များကို သြဂုတ်လ (သို့) စက်တင်ဘာလအတွင်းအသုံးပြုထားသော သူများကို MPT Club မှ SMS ကို ဦးစားပေးအနေဖြင့် ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။
၃။ ဤပိုမိုးရှင်းအား MPT Club Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
၄။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ စက်တင်ဘာလ(၁၀) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
၅။ Promo code အား အသုံးပြုသူ (၂,၀၀၀) အထိသာအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။
1. Crystal Jade ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို မည်သူတွေက ခံစားခွင့်ရနိုင်မလဲ။
ယခုအစီအစဉ်သည် SMS ရရှိသော MPT Club Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့၀င်များသာ ကံစမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက် ရှိပါသည်။
Diamond member – 1,000 customers
Platinum member – 1,000 customers
Promo code အသုံးပြုမှု သည် ကန့်သတ်ပမာဏ ကိုရောက်ရှိသွားပါက အသုံးပြု၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ခြွင်းချက် အနေဖြင့် SMS လက်ခံရရှိသူများမှာ MPT Club အဖွဲ့ဝင်ထားသူ၊ MPT Club ၏ Diamond, Platinum အဖွဲ့၀င်များ၊ MPT Money ကို register လုပ်ထားသူ နှင့် MPT Club ၏ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ redemption menu ကို လဲလှယ်ထားသော သူများဖြစ်သည်။
2. ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိမှာလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ level အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Diamond level အဖွဲ့၀င်များ အတွက် ၇,၅၀၀ ကျပ် လျှော့စျေးရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး Platinum level အဖွဲ့၀င်များကတော့ ၅,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေးရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
*** ခြွင်းချက်: အဖွဲ့၀င်များအနေနဲ့ ယခုပရိုမိုးရှင်းကို တစ်ကြိမ်သာ ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။***
3. ယခု ပရိုမိုးရှင်းကို ဘယ်လို ရရှိနိုင်မလဲ။
SMS မှတစ်ဆင့် ပရိုမိုကုဒ် ရရှိသော အဖွဲ့၀င်များ (Diamond နှင့် Platinum level) သာ ပါ၀င်နိုင်သည်
*345*4*2# သို့ခေါ်ဆိုပါ၊ ထို့နောက် ပရိုမိုကုဒ် အားရိုက်ထည့်ပါ။
Code ထည့်သွင်းမူ အောင်မြင်ကြောင်း SMS သင် ရရှိပါမည်၊ ၎င်း SMS အား ဆိုင်ကောင်တာသို့ ပြသပါ ပြီး level အလိုက် promotion ခံစားနိုင်ပါသည်။
4. ပရိုမိုရှင်း ကာလမှာ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်မလဲ။
၁၀ ရက်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ မှ ၃၀ ရက်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
***ခြွင်းချက်: SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိထားသော ပရိုမိုကုဒ် မှာ ပရိုမိုးရှင်း ကာလအတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။***
5 . MPT Club ကို မည်သို့ အဖွဲ့ဝင်ရမည်နည်း။